मन्त्री हेरेफेरमा आलटाल: एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
मन्त्री हेरेफेरमा आलटाल: एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट!
सुरूमा बजेटमाथिकाे छलफल चलिरहेकाे अवस्थामा मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीले टारे
२०७९ असार ९, बिहीबार ०४:३८:००
काठमाडौं । पार्टीका सबै नेतालाई पालैपालो मन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने योजनामा रहेकाे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाधक बनेका छन् ।
पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्था गरेको उसको ठहर छ । सुरूमा बजेटमाथिकाे छलफल चलिरहेकाे अवस्थामा मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीले टारेका थिए । पटक पटक मन्त्री फेरबदल गर्दा सरकारप्रति जनताकाे नकारात्मक साेचकाे विकास हुन सक्ने भन्दै मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक देखिदैनन् । प्रधानमन्त्रीका कारण पूराना मन्त्रीहरुलाई राहत मिलेको छ । सरकारमा जाने भनेर खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरुले भने पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।